Torolàlana momba ny fanariana fako sy fanodinana fako AZ - Filankevitry ny morontsiraka afovoany
Trano fandoroana sarony mavo
Tobin-javamaniry sarony maitso
Andro fanangonana Bin
Mitatitra serivisy tsy hita
Fanamboarana sy fanoloana daba
Hanova ny habenao
Serivisy fako vaovao
Serivisy fako fandraharahana
Fanamboarana plastika malefaka
Mamandrika fanangonana Kerbside betsaka
FAQ amin'ny fanangonana Kerbside marobe
Mitatitra serivisy marobe tsy hita
Fandaharana fanabeazana ho an'ny fiaraha-monina
Torolàlana momba ny fanariana fako sy fanodinana fako AZ
Tsy afaka manodina an'izany ianao!
Andro misokatra Cleanaway Somersby
Taratasy hetsika sy loharanon-karena ao an-dakilasy
Vaovaon'ny Sekoly 1 Coast
Fandaharam-pianarana voalohan'ny Little Sorters
Alao alamina & MANDRESY
Fako hafa & fanodinana
Tobim-pako Central Coast
Mampihena ny fakonao
Fanodinana fako elektronika
Light Globe, Finday ary Fanorenana Batterie
Syringe azo antoka sy fanariana fanjaitra
Tatitra ny fako nariana
Famerenana metaly simba
FANAMARIHANA MANDRAKIZAY SERVIS SERVICES VOALOHANY: Nesorina ny fiatoana vonjimaika amin'ny famandrihana fanangonana amoron-dalana ary afaka mamandrika serivisy amoron-dalana betsaka izao ny mponina ao Central Coast. Mbola misy fiantraikany amin'ny fihanaky ny tsimokaretina Covid-19 amin'izao fotoana izao ny mpiasantsika, na izany aza, ny fitsipika fitokanana vaovao dia nampihena ny fiantraikany ary afaka manohy ny serivisy amin'ny fahafaha-manao voafetra isika. Noho ny tsy fahampian'ny loharanon-karena dia mety tsy ho hita mandritra ny herinandro vitsivitsy ny fahafahan'ny serivisy feno ary noho izany dia mety ho hitan'ny mponina fa atolotra azy ireo ny daty famandrihana ao anatin'ny herinandro vitsivitsy. Raha mamandrika serivisy sisin-dalana ianao dia ataovy azo antoka fa manamarina ny datin'ny famandrihanao ianao ary apetraho eo amin'ny sisin-dalana ny fako betsaka anao ny andro alohan'ny daty famandrihanao. Te hisaotra ny Central Coast Community izahay noho ny faharetany.	x
Hadinonao ny tenimiafinao Hiditra Mpikambana
Lisitry ny fako fanabeazana Fandaharana fanabeazana ho an'ny fiaraha-monina Torolàlana momba ny fanariana fako sy fanodinana fako AZ Video Hub Tsy afaka manodina an'izany ianao! Andro misokatra Cleanaway Somersby Fandaharam-pampianarana an-tsekoly Taratasy hetsika sy loharanon-karena ao an-dakilasy Vaovaon'ny Sekoly 1 Coast Fandaharam-pianarana voalohan'ny Little Sorters Alao alamina & MANDRESY fifaninanana Krismasy
Misy adinontsika ve? Alefaso eto ny soso-kevitrao
Torolàlana momba ny fanariana fako sy fanodikodinan'ny AZ – Zavatra vaovao ampiana
Fenoy azafady ny taratasy etsy ambany ary ampidirinay ao amin'ny torolàlana momba ny fanariana fako sy ny fanodinana ny fako ny AZ.
Tianao ve ny ampahafantarinay anao ny fomba fanariana ity entana ity?
Raha Eny, ampidiro eto ambany ny antsipirihan'ny fifandraisanao:
Ampidiro azafady teny fanalahidy.
Valiny fikarohana momba ny ""
Karazana fako tsy hita. Manandrama teny fanalahidy hafa azafady.
Asidra sy alcalis
Miverena any amin'ny Tokatrano manaraka Chemical CleanOut andro.
Asio kapoaka tsy misy na inona na inona ao anatinao daba fanodinana mavo sarony. Marihina fa ity dia natao ho an'ny kapoaka famafazana ao an-tokantrano ihany (tsy misy zaridaina, garazy na kapoaka fandokoana).
Asio kapoaka tsy misy na inona na inona ao anatinao daba fanodinana mavo sarony na ento amin'ny a Miverena ary Mahazoa fanangonana teboka.
Atsipazo ao anaty baolina ary apetraho ao anaty vilany daba fanodinana mavo sarony.
Alefaso ho anao fanangonana fanadiovana amoron-dalana na ento amin'ny iray amin'ireo Tobim-pitantanana ny fako an'ny filankevitra.
Tsidiho ny SafeWork NSW tranonkala hitadiavana mpiantoka manana fahazoan-dàlana na hitondra any amin'ny iray amin'ireo Tobim-pitantanana ny fako an'ny filankevitra (jereo azafady ny fitsipika momba ny fialana asbestos).
Asio mangatsiaka ny anao sarony mena jeneraly dabam-pako.
Fitambaran'ny zaza amam-behivavy
Ampidiro ao ny daba fanodinana mavo sarony.
Raiso amin'ny iray amin'ireo Tobim-pitantanana ny fako an'ny filankevitra.
Ny marika AA, AAA, C, D ary 9V (samy azo averina na tsy azo averina) dia ekena amin'ny fanodinana amin'ny alàlan'ny programa fanangonana manokana, ao anatin'izany: Tranoben'ny mpitantana na trano famakiam-boky, Aldi toeram-pivarotana lehibe, Tontolo bateria or Birao miasa.
Coast Council Recycling
Mivarotra entana, manome entana tsara kalitao ho an'ny fiantrana, apetraho ao anatinao sarony mena jeneraly dabam-pako na apetraho ho anao fanangonana fanadiovana amoron-dalana.
Asio tavoahangy tsy misy na inona na inona ao anatinao daba fanodinana mavo sarony na ento amin'ny a Miverena ary mahazo teboka fanangonana.
Mivarotra entana, manome entana tsara kalitao ho an'ny fiantrana na apetraho ho anao fanangonana fanadiovana amoron-dalana.
Vilany biscuit (Metal)
Ampidiro ao ny dabam-pako fanodinana mavo sarony.
Asio lovia tsy misy na inona na inona ao anatinao daba fanodinana mavo sarony.
Mivarotra entana, manome entana tsara kalitao ho an'ny asa soa na fivarotam-boky fanindroany na apetraho ao amin'ny anao daba fanodinana mavo sarony.
Ampidiro ao ny daba fanodinana mavo sarony misaraka amin'ny tavoahangy.
Ampidiro ao ny vera sarony zaridaina fitoeran-javamaniry na apetraho ho anao fanangonana fanadiovana amoron-dalana.
Ento any amin'ny mpamatsy kojakoja fanorenan-trano efa nodiovina na any amin'ny iray amin'ireo Tobim-pitantanana ny fako an'ny filankevitra.
Ampidiro ao ny daba fanodinana mavo sarony. Raha tsy te hahazo intsony ianao dia asio sticker No Junk Mail eo amin'ny boaty taratasinao.
Ampidiro ao ny sarony mena jeneraly dabam-pako.
Raha madio sy maina dia miverena any amin'ny toeram-pivarotana eo an-toerana amin'ny alàlan'ny RedCycle programa na apetraho amin'ny anao sarony mena jeneraly dabam-pako.
Kojakoja fiara (metaly)
Atsipazo ary apetraho ao anaty vilany daba fanodinana mavo sarony.
Carton (rano sy ronono vaovao) - tsy maharitra
Esory ny ranom-boankazo, atsipazo ao anaty vilany daba fanodinana mavo sarony.
Cartons (ronono ela velona, ​​ranom-boankazo, stock, custard, lasopy, sns) – Tetra Pak / Long Life
Ny poppers kely kokoa dia azo entina amin'ny a Miverena ary Mahazoa toerana fanangonana na apetraho ao amin'ny anao sarony mena jeneraly dabam-pako. Asio baoritra maharitra maharitra kokoa ao anatinao sarony mena jeneraly dabam-pako.
CD / DVD / Vidéo / Floppy disks / DVD fonony
Mivarotra entana, manome entana tsara kalitao ho an'ny fiantrana, apetraho ho anao fanangonana fanadiovana amoron-dalana na apetraho amin'ny anao sarony mena jeneraly dabam-pako.
Ento any amin'ny mpamatsy akora fanorenan-trano recycle.
Hazo krismasy (soka)
Asio hazo sandoka ao anatinao sarony mena jeneraly dabam-pako.
Hazo Krismasy (tena)
Asio hazo tena izy (maty na velona) ao anatinao vera sarony zaridaina fitoeran-javamaniry na avoahy ny maitso anananao fanangonana fanadiovana amoron-dalana.
Fanadiovana tavoahangy famafazana
Asio tavoahangy tsy misy na inona na inona ao anatinao daba fanodinana mavo sarony.
Mivarotra entana, manome entana tsara kalitao ho an'ny asa fiantrana, ampiasaina ho lamba fanadiovana, apetraho ho anao fanangonana fanadiovana amoron-dalana na apetraho amin'ny anao sarony mena jeneraly dabam-pako.
Kaopy kafe - azo ariana
Hamarino raha ekena ho soloina amin'ny alalan'ny a Toerana fanangonana terracycle na ario ao aminao sarony mena jeneraly dabam-pako.
Asio vilia tsy misy na inona na inona ao anatinao daba fanodinana mavo sarony.
Mankanesa any amin'ny iray amin'ireo Tobim-pitantanana ny fako ao amin'ny filankevitra mba hamerenana amin'ny alàlan'ny e-efitra fandaharana.
Ento any amin'ny mpamatsy akora fanorenan-trano recycle
Tavoahangy famafazana menaka mahandro
Asio kapoaka tsy misy na inona na inona ao anatinao daba fanodinana mavo sarony.
Ampidiro ao ny fako ankapobeny sarony mena aho.
Akanjo / fonosana syringe / Tweezers / fonon-tanana
Asio tavoahangy tsy misy na inona na inona ao anatinao daba fanodinana mavo sarony na ento amin'ny a Miverena ary Mahazoa fanangonana teboka.
E-fako / fitaovana elektronika
Asio baoritra tsy misy na inona na inona ao anatinao daba fanodinana mavo sarony.
Fencing Colourbond, dobo, hazo
Alefaso ho anao fanangonana fanadiovana amoron-dalana (Tsy maintsy mifanaraka amin'ny habeny sy ny fameperana lanja - tsy hanaiky afa-tsy fizarana ho soloina - fa tsy ampahany amin'ny sisin-tany manontolo) na alaina amin'ny iray amin'ireo Tobim-pitantanana ny fako an'ny filankevitra.
Raiso amin'ny iray amin'ireo Tobim-pitantanana ny fako an'ny filankevitra, na ento any amin'ny Tokatrano manaraka Chemical CleanOut andro.
Mifandraisa amin'ny Service NSW momba ny andro fialan-tsasatra ho lany daty flares. Tsy manana fotodrafitrasa hanariana ireo izahay. AZA apetraka ao anatin'ny dabam-pako ao an-tranonao fa mety hipoaka.
Voninkazo sy ahi-dratsy
Ampidiro ao ny vera sarony zaridaina fitoeran-javamaniry.
Fantsona fluorescent sy globes
Ny fantsona dia azo entina any amin'ny Tobim-pitantanana ny fako ao Buttonderry. Globes afaka mandeha any amin'ny tranombokin'ny Filankevitra na tranoben'ny mpitantana, na mametraka ny anao sarony mena jeneraly dabam-pako.
Kapoaka famafazana manidina
Kitapo vita amin'ny foil (voankazo kafe - mafy)
Kitapo misy foil (Chips, Crackers, sns.)
Foil pie na barbecue trays
Ampidiro ao ny sarony mena jeneraly dabam-pako na ario ao anaty komposta na toeram-piompiana kankana.
Raha plastika malefaka madio sy maina dia miverena any amin'ny toeram-pivarotana eo an-toerana amin'ny alàlan'ny RedCycle programa na apetraho amin'ny anao sarony mena jeneraly dabam-pako.
Mivarotra entana, manome entana tsara kalitao ho an'ny fiantrana atolotra ho anao fanangonana fanadiovana amoron-dalana, na ento amin'ny iray amin'ireo Tobim-pitantanana ny fako an'ny filankevitra.
Ampidiro ao ny dabam-pako sarony mena na ario ao anaty komposta na toeram-piompiana kankana.
Mivarotra entana, manome entana tsara kalitao ho an'ny fiantrana, apetraho ho anao fanangonana fanadiovana amoron-dalana, na ento amin'ny iray amin'ireo Tobim-pitantanana ny fako an'ny filankevitra.
Tavoahangy entona sy cylinders
Tavoahangy vera sy siny
Asio tavoahangy sy siny tsy misy na inona na inona ao anatinao daba fanodinana mavo sarony.
Tavoahangy famafazana volo
Hay / mololo
Ampidiro ao ny fitoeran-javamaniry sarony maitso.
Fanafanana rano mafana
Simika ao an-trano
Asio koveta tsy misy na inona na inona ao anatinao daba fanodinana mavo sarony.
Tsidiho ny Planet Ark tranonkala hahitanao ny toerana iasanao akaiky indrindra na apetrakao sarony mena jeneraly dabam-pako.
Tavoahangy famafazana bibikely
Kitapo ranon-javatra IV / Tubing
Apetraho ao anatin'ny dabam-pako fanodinana sarony mavo.
Asio boaty tsy misy na inona na inona ao anatinao daba fanodinana mavo sarony.
Ampidiro ao ny daba fanodinana mavo sarony misaraka amin`ny tavoahangy, fitoeran-javatra na siny.
Raiso ho Tranoben'ny mpitantana na trano famakiam-boky, na apetraho amin'ny anao sarony mena jeneraly dabam-pako.
Loza sy vodiny
Alefaso ho anao fanangonana fanadiovana amoron-dalana.
Baoritra maharitra maharitra (ronono, ranom-boankazo, stock, custard, lasopy, sns) - Tetra Pak / Long Life
Ny poppers kely kokoa dia azo entina amin'ny a Miverena ary Mahazoa fanangonana tondroy na apetraho ao amin'ny dabam-pako ankapobeny ny sarony mena. Asio baoritra maharitra maharitra kokoa ao anatinao sarony mena jeneraly dabam-pako.
Asio siny tsy misy na inona na inona ao anatinao daba fanodinana mavo sarony.
Hiverina any amin'ny participe mpahay simia.
Ampidiro ao ny sarony mena jeneraly dabam-pako na ento amin'ny iray amin'ireo Tobim-pitantanana ny fako an'ny filankevitra.
Mankanesa any amin'ny Tranoben'ny Admin na tranomboky na ento any amin'ny iray amin'ireo Tobim-pitantanana ny fako an'ny filankevitra.
Ampidiro ao ny daba fanodinana mavo sarony, rehefa nesorina ny fonon-plastika.
Menaka (fandrahoan-tsakafo - fryer sns)
Raha vao mangatsiatsiaka ny menaka dia apetraho ao anaty fitoeran-javatra fanariana ary avela hivaingana/hihamafy. Ario in sarony mena jeneraly dabam-pako. Ny fatra kely kokoa dia azo kosehina amin'ny lamba famaohana ary apetraka ao anaty komposta ao an-trano. Vola be dia azo ariana amin'ny manaraka Ny sandan'ny anjara Household Chemical CleanOut andro
Loko fandokoana (foana ary latsaky ny 15 litatra)
Kaopy taratasy (anisan'izany ny kaopy kafe azo ampiasaina, kaopy zava-pisotro malefaka sns)
Lamba famaohana taratasy
Raiso amin'ny iray amin'ireo Tobim-pitantanana ny fako an'ny filankevitra na any amin'ny mpamatsy kojakoja fanorenan-trano efa recycle.
Biby fiompy sakafo
Fako biby anisan'izany ny fako kitty
Box pizza (madio)
Kitapo plastika - misy foil (Chips, Cracker Bags etc.)
Kitapo plastika sy fonosana
Siny plastika sy harona
Fonosana plastika toy ny kilalao sy atody Paska
Tavoahangy fisotroana plastika
Esory ny sakafo ary apetraho ao anatinao daba fanodinana mavo sarony.
Plumbing - fantsona PVC
Miverena any amin'ny Tokatrano manaraka Chemical CleanOut andro
Polystyrene sy Styrofoam
Vilany sy lapoaly
Fingotra anaty fantsona
Ampidiro ao ny fako ankapobeny sarony mena fitoerany
Shampoo / Conditioner tavoahangy
Raiso amin'ny iray amin'ireo Tobim-pitantanana ny fako an'ny filankevitra, na ento any amin'ny Tokatrano manaraka Chemical CleanOut andro
Kitapo plastika malefaka sy fonony
Asio punnets tsy misy na inona na inona ao anatinao daba fanodinana mavo sarony.
Syringes / Sharps
Fonosana takelaka (izany hoe: takelaka panadol)
Fitehirizana sakafo entina (plastika)
Azo averina amin'ny alalan'ny TerraCycle mialà any amin'ny mpitsabo nify mandray anjara na manary ny ao aminao sarony mena jeneraly dabam-pako.
Hazo voatsabo sy makarakara
Mivarotra entana, manome entana tsara kalitao ho an'ny fiantrana, apetraho ho anao fanangonana fanadiovana amoron-dalana na apetraho amin'ny anao sarony mena jeneraly dabam-pako
Raiso amin'ny iray amin'ireo Tobim-pitantanana ny fako an'ny filankevitra. Azafady, azafady fa tsy azo apetraka ao amin'ny fanangonana fanadiovana sisin-dalana ny kodiarana.
Hazo tsy voatsabo
Baoritra misy savoka
Mivarotra entana, manome entana tsara kalitao ho an'ny fiantrana na apetraho ho anao fanangonana fanadiovana amoron-dalana
Varavarankely / fitaratra
Tavoahangy misy divay
Taratasy famonosana (tsy foil na plastika)
Miverena any amin'ny Tokatrano manaraka Chemical CleanOut andro na fandraisana anjara fanodinana xray fandaharana
Filankevitry ny morontsiraka afovoany Cleanaway
Antsoy ny fanontaniana momba ny serivisy rehetra 1300 1COAST (1300 126 278)
fantaro ny Atrikasa Sekoly Fako
Taratasy ho an'ny Ankizy sy Loharanon-dakilasy
Serivisy fako sy fanodinana